Resaka famerenan’i Frantsa ireo asakanto avy aty Afrika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Febroary 2019 6:01 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Italiano, русский, عربي, Ελληνικά, Français
Pikantsarin’ny vaovao amin’ny fahitalavitra TV5 Monde miaraka amin’i Bénédicte Savoy sy Felwine Sarr ao amin’ny YouTube.
Nanambara ny Filoha Frantsay Emmanuel Macron tamin’ny volana Novambra 2017, nandritra ny kabary nataony tao amin’ny Oniversiten’i Ouagadougou, Borkina Faso fa tsy any amin’ireo mozea any Eoropa ihany no ampirantiana ny vakoka Afrikana ary tsy maintsy raisina ny fepetra mba hamerenana vonjimaika na tanteraka ny vakoka Afrikana any Afrika. Ho tohin’ity fangatahana ity, namariparitra hoe ahoana ny fomba hanatanterahana ny famerenan’ Frantsa indray ny vakoka ara-kolontsaina Afrikana ny tatitra iray nosoratan’i Felwine Sarr, mpampianatra ao amin’ny Oniversite Gaston-Berger any Saint –Louis (Sénégal) sy Benedicte Savoy, mpampianatra ao amin’ny Technische Universitat Berlin (Alemaina).
Amin’izao fotoana izao dia vakoka miisa 90.000 eo ho eo avy any Afrika Atsimon’i Sahara no hita ao amin’ny mozea any Frantsa. Ny ankamaroan’izany dia vokatry ny halatra sy ny fandrobana tamin’ny adin’ny fanjanahantany.
Nanome fanazavana tao amin’ny lahatsoratra iray nivoaka tao amin’ny gazety Panafrikana Nsi mababu, ireo mpanao gazety Konsimbo Ophelie sy Poda Gabriel :
Maherin’ny 90% ny vakoka Afrikana mainty hoditra hita any ivelan’ny Kaontinanta, araka ny voalazan’ireo manam-pahaizana. Raha norobaina nandritra ny fanjanahantany dia any am-pelatanan’ny Mozea Britanika, ny Mozea Quai Branly, na ny mozea any Berlin ny ankamaroan’izy ireo. Nitaky ny hamerenana ireo zava-tsarobidy ireo izay norobaina nandritra ny vanimpotoan’ny fanjanahantany i Bénin, Nizeria ary ny Repoblika Demaokratikan’i Kôngô, ankoatra ireo hafa, amin'izao fotoana izao. Sady sarotra no resaka politika ny resaka famerenana ny asakanto Afrikana ary lasa resabe izay tokony ho fantarina amin’ny antsipiriany ankehitriny ny votoatiny.
Voakasik’ity fandrobana ity avokoa ny firenena Afrikana izay very vakoka ara-javakanto hatrany amin'ny 85 ka hatramin’ny 90 isan-jato ao amin’ny Kaontinanta. Nanazava ilay mpanao gazety Eva Rassoul, tao amin’ny France Culture:
Nanazava tao amin’ny vaovaon’ny TV5 Monde ireo mpampianatra Benedicte Savoy sy Felwine Sarr (lahatsary etsy ambany) ny amin'ny dingana arahana mba hanombanana ny fomba atao hampiharana ity fanorena'asa ity :
Nanolotra ny valin’ity tatitra ity tao amin’ny lahatsoratra iray tao amin’ny tranonkalany ilay mpanao gazety Philippe Rey :
Nitantara ny halatra tamin’ny alàlan’ny tantaran’izao tontolo izao izy, nanombana ny anjaran’i Frantsa, namolavola voalohany ny isan’ireo asakanto nangalarina, nitantara ny fikasan’ny firenena Afrikana hamerenana indray ny vakokany, nanadihady ireo olana ara-pitsarana izay miseho, ary namoaka soso-kevitra azo tsapain-tanana maromaro amin’ny fanatanterahana ny famerenana, iray amin’ireo tetikasa feno fahasahiana indrindra tamin’ity taonjato faha-21 ity.
Ao Bénin, nampatsiahy tao amin’ny tranonkala Bénin Revele ilay mpanao gazety Laurent Adjovi:
Vao nanome alalana ny famerenana indray ao Bénin ny asakanto miisa 26 i Frantsa. Noho ny fifanakalozan-kevitra malalaka nifanaovana tamin’i Frantsa dia nanome fahafahana ho an’ny Béninoà i Patrice Talon noho izany ny hijerena indray, ohatra, ny asakanto tamin’ny faha-mpanjaka, izay nandritra ny fitondran’ny mpanjaka Abomey Ghézo (1818-1858), Glélé (1858-1889), ary Béhanzin(1890-1894), ny seza fiandrianana, ny tehina, ary ny tehin’ny mpanjaka.
Tao anatin’ity fanjohin-kevitra manome lanja ny zavakanto Afrikana ity, dia nitokana ny Mozean’ny Sivilizasiona mainty hoditra tamin’ny 6 Desambra 2018 i Senegal, izay efa ahitana toerana ara-kolontsaina maromaro, toy ny Tranon’andevo ao Goré sy ny Mozean’ny Ramatoa Henriette Bathily :
Notokanan’ny Filohan’i Senegaly Macky Sall ny Alakamisy (6 Desambra 2018) tao Dakar ny Mozean’ny Sivilizasiona mainty hoditra. Hetsika izay nipoiran'ny adihevitra momba ny famerenana indray ireo harena ara-kolontsaina Afrikana norobain’i Frantsa nandritra ny fanjanahantany. Tanteraka ny nofinofy tany amin’ny dimampolo taona lasa.
Tany Côte d’Ivoire, nanazava ny fifanarahana tamin’i Frantsa momba ny famerenana indray ny asakanto ara-tantara ao amin’ny fireneny ny Minisitry ny Kolontsaina sy ny Frankôfônia Bandama Maurice :
Mino izahay fa hiverina any Côte d’Ivoire avokoa na amin’ny ampahany ireo zavakanto miisa 148 amin’ny taona 2019. 148 no nangatahanay satria izany no azonay raisina aloha amin’izao ao amin’ny tahirim-bola sy ny fanangonana ao mozea-nay.
Tany Kongo Brazavile, notokanana vao haingana tany Pointe Noire ihany koa ny mozean'ny Faribolana Afrikana :
Ny tanjon’ity tetikasa ity dia ny ahafahan’ireo tanora hahita indray ny tantaran’ny Kolontsainy. Toerana ara-kolontsaina tranainy ho an’ireo Kongôley, talohan’ny namadihana azy ho Lapam-pitsarana ary tamin’ny farany dia nilaozana, nohavaozina ilay trano ary namboarina tamin’ny taona 2017 mba ho lasa mozea. Efa nandray mpitsidika mihoatra ny 600 isam-bolana ny mozean’ny Faribolana Afrikana, hatramin’ny nisokafany ho an’ny daholobe tamin’ny 4 Desambra (2018).
Na izany aza, maro ireo mpisera amin’ny Aterineto Afrikana no mihevitra fa misy olana maromaro tokony hovahana alohan’ny ahafahan’ny asakanto Afrikana miverina indray. Nametra-panontaniana i Yassin Ciyow, mpanao gazety ho an’i Neomag hoe : Sarotra ve ny mamerina asakanto ?
Etsy andaniny anefa, ny fahasarotana amin’ny asakanton’ny vanimpotoanan’ny fanjanahantany dia avy amin’ny zava-misy taorian'ny nandrobana azy ireo, satria nomena na natolotra ( araka ny lalàna tamin’izany fotoana izany) ho an'ny lahatahirm-panjakana Frantsay. Noho izany, tafiditra ao anatin’ny fananam-pirenena azon'ny daholobe ampiasaina ireo asakanto ireo ka lasa fananan’ny Fanjakana Frantsay. Tany aloha tany, nisy ireo lalàna manivaka nolaniana mba ‘’hanalàna sokajy’’ ny asakanto sasany. Noho io fanovana lalàna io no naha-tafaverina ny Hottentote Venus tany Afrika Atsimo sy ny lohan’ireo Maori tany Nouvelle-Zelande.
Ankoatra ny fahasarotana ara-pitsarana dia manontany noho izany ireo Afrikana amin’ny fahafahan’ny firenena maro hiaro sy hitahiry ireo vakoka sarobidy ara-kolontsaina tsy fahita firy, izay azo antoka fa Afrikana kanefa manerantany ihany koa.
Mpirahalahy roa samihafa no nampiofo ny hira highlife Nizeriana
Nizeria 1 andro izay
Nizerià : tantaran'ny mozika ao Lagos, ny vanimpotoanan'ny fanjanahantany hatramin'ireo taona 1970
Nizeria 2 herinandro izay